Prototyping iyo naqshadeynta CNC | qalab bilaash ah
Mashiinnada CNC waxba ma noqonayaan haddii aan la helin habab hore oo lagama maarmaan u ah barnaamijyadooda. Waxaan ula jeedaa prototyping iyo naqshadeynta CNC si aad u dhisto waxa aad rabto inaad ku gaadho mishiinka. Si tan loo sameeyo, CAD/CAM software waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu naqshadeeyo waxa la soo saarayo ama la qaabeeyey ka dibna u gudbi qaabka koodka la fahmi karo ee mashiinka CNC si uu u fasiro dhaqdhaqaaqyada ay tahay inuu sameeyo.
1 Naqshadeynta iyo heerarka metrology
2 Software-ka CNC ee bilaashka ah iyo kuwa iska leh
2.1.1 Software fudud
2.2 CAD / software design
2.2.2 Sameeyaha Carveco
2.3 CAM Software (G-koodka CNC)
2.3.2 Hal-abuuraha CAM
2.3.6 Wuxuu furayaa CAM
2.4 software jilitaanka
2.4.4 Daawade NC
2.4.5 Eureka G-koodka
2.5 Software-ka kantaroolka bilaashka ah ee CNC iyo kuwa iska leh
2.5.5 Soo-diraha G- Koodhka Caalamiga ah (UGS)
2.5.6 Xakamaynta Dhismaha Furan
2.5.7 Shumaca GRBL
2.5.11 Fur CNCPilot
Naqshadeynta iyo heerarka metrology
Alwaax-qorista Opt Laysers Buluugga Laser Cnc Machine
para naqshad lagu dabaqo mashiinada CNC, tillaabooyin taxane ah iyo software ayaa loo baahan yahay:
qalabka cabbirka: si loo sameeyo habka cabbirka oo dhan ee lagama maarmaanka u ah in la abuuro naqshad ku habboon. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad abuurto a qalabka mashiinka, waa in uu leeyahay astaamo isku mid ah oo ilkaha ah, dhexroorka, iwm., si ay ugu habboonaato oo u shaqeyso si sax ah.
CAD softwareNaqshadeeyuhu wuxuu u isticmaali doonaa barnaamijyadan inuu ku sawiro qaybaha kombayutarka sida la filayo inay noqdaan kuwo run ah, ama 2D, 2.5D ama 3D. Farqiga u dhexeeya saddexdan nooc ee naqshaduhu waa:
2D: laba cabbir (flat), sida goynta CNC ee saxan bir ah.
2.5D: waxaad ku shaqaysaa laba cabbir iyo badh, taas oo muujinaysa inaad samayn karto la mid ah sida 2D, laakiin sidoo kale waxaad ku shaqayn kartaa dhumucda lakabka. Tusaale ahaan, xaradhka laysarka.
3D: waxaad ku shaqeysaa saddex cabbir, adigoo awood u leh inaad abuurto tirooyinka mugga. Tusaale ahaan, marka gabal la rogayo.
Software-ka jilitaankaMararka qaarkood marka ay timaado wax soo saarka guud ama qaybo muhiim ah, software jilitaanka ayaa inta badan loo isticmaalaa si loo hubiyo in natiijadu tahay waxa aad rabto.
Waxay noqon kartaa software akhriya G-Code-ka la sameeyay oo saadaalin kara dhibaatooyinka suurtagalka ah inta lagu jiro mashiinka si loo saxo ka hor. Xaaladdan oo kale, jilitaanka ayaa la samayn doonaa ka dib marxaladda 4.
Waxay noqon kartaa softiweerka jilitaanka ee habka ama isticmaalka qaybaha si loo arko inay si fiican u shaqeeyaan, guuldarrooyinka suurtagalka ah inta lagu jiro hawlgalka, isku halaynta, iwm. Xaaladdan oo kale, jilitaanka ayaa la samayn doonaa ka hor CAM (marxaladda 4).
Software-ka CAM: Thanks to barnaamijka noocaan ah, isticmaaluhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si fudud ugu gudbiyo naqshadda CAD Koodhka G kaas oo ay fahmi karaan mishiinka CNC, sidii uu ahaa kiiskii daabacayaasha 3D. Dhanka kale, xirmooyinka CAM qaarkood ayaa sidoo kale ku jira qalab dheeri ah si loo xisaabiyo quudinta iyo xawaaraha ku dhici doona mashiinka CNC. Laba arrimood waa in la xuso markan:
CAM waa CNC "badalka" ee Slicer ee daabacaadda 3D ama wax soo saarka wax lagu daro. The Kala jajab Waxa uu mas'uul ka ahaa isticmaalka naqshadda 3D CAD oo jarjaraya, ama u qaybinaya lakabyo, si ay mishiinka u abuurto iyada oo loo marayo extrunder ama soo-gaadhista resinka.
CAM kuma jeedo wax soo saarka wax lagu daro ee kiiskan, laakiin loogu talagalay wax-soo-saarka wax-soo-saarka. Si kale haddii loo dhigo, lakabyada laguma dari doono, laakiin laga bilaabo gabal hore ama xannibaad, walxaha waa la tirtirayaa ilaa qaabka ugu dambeeya la gaaro. Tusaale ahaan, qiyaas router CNC ah oo ka shaqaynaya sagxad alwaax ah si uu u sameeyo qurxinta gabal alaabta guriga ah. Xaaladdan oo kale, laga bilaabo block square ee alwaax, mashiinku wuxuu isticmaali doonaa qalabka ku habboon ama gooyo si uu u soo saaro naqshadaha oo uu baabi'iyo qaybaha aan loo baahnayn.
software xakamaynta: waa barnaamij lagu dhex daray mishiinka CNC laftiisa, maadaama inta kor ku xusan ay ku jirtay kombuyuutarka loo isticmaalo naqshadaynta, kaas oo masuul ka noqon doona akhrinta faylka G-Code ee loo gudbiyay mishiinka oo u tarjumi doona calaamadaha xakamaynta. ee matoorada mishiinka si ay u fuliyaan dhaqdhaqaaqyada lagama maarmaanka u ah mashiinka qaybta lagu tilmaamay.
mashiinka CNC: Waxay mas'uul ka noqon doontaa socodsiinta gabalka si natiijadu u noqoto mid la mid ah naqshadii la abuuray bilowgii. Tusaale ahaan, haddii aad naqshadeysay calaamad oo aad rabto inaad laysarka ku dhejiso saxan, markaa madaxa laysarka ayaa samayn doona dhaqdhaqaaqyada lagama maarmaanka ah si uu u xardho qaabka saxda ah.
QAXaaladaha qaarkood, gaar ahaan wax soo saarka ballaaran, waxaa loo baahan doonaa tallaabo dheeraad ah oo lagu xakameynayo tayada, taas oo noqon karta mid toos ah ama gacanta. Xaalado badan, waxay ku salaysan tahay xulashada gabal ama dufcad bakhtiyaa-nasiib ah iyo samaynta imtixaannada si loo eego haddii ay buuxisay filashooyinka, heerarka, iwm.
Sida aad arki karto, labadaba daabacayaasha 3D sida mashiinnada CNC ay leeyihiin hab la mid ah. Dhab ahaan, daabacaha 3D waxaa loo tixgelin karaa mashiinka CNC ee wax soo saarka wax soo saarka.
Software-ka CNC ee bilaashka ah iyo kuwa iska leh
Sida kiiska software ee daabacayaasha 3D, mashiinnada CNC waxaad sidoo kale ka heli kartaa software iska leh iyo software il furan ama bilaash ah, kuwaas oo sida caadiga ah gebi ahaanba bilaash ah. Halkan waxaad ku ogaan kartaa qaybaha software ee ku lug leh naqshadaynta CNC iyo qaar ka mid ah barnaamijyada lagu taliyay.
Waxaa jira apps aad u xiisa badan oo loogu talagalay aaladaha mobilada, sida kan oo kale CNC Simulator ee Android.
Halkii laga lahaan lahaa software CAD, software CAM, iwm, qaar xirmooyinka software waxay leeyihiin wax kasta oo isku dhafan, marka waa inaad isticmaashaa hal barnaamij oo kaliya. Tani waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo sidoo kale faa'iido darrooyinkeeda, maadaama ay aad u roon tahay laakiin waxay yeelan kartaa xaddidaadyo marka la barbardhigo mashaariicda si gooni ah u jira.
Easel waa software ay abuurtay Inventables waana mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran oo lagula taliyay AIO-yada bilowga ah. Waxaa ku jira CAD, CAM, iyo xakamaynta hal xirmo. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto naqshadaha, u beddelo G-Code oo aad ku socodsiiso mashiinkaaga CNC. Waa shabakad ku salaysan, sidaa awgeed uma baahna in la rakibo, waxayna la jaan qaadi kartaa nidaamyada hawlgalka ee kala duwan. Dhanka qiimaha, isdiiwaangelinta ayaa ku kacaysa $20 bishii, ama waxaad sidoo kale bixin kartaa khidmadda sanadlaha oo aad kaydin kartaa € 7 bishii.
Software-kan kale ayaa sidoo kale isku daraya Soo diraha CAD, CAM iyo G-Code xitaa waxay leeyihiin awood jilitaanka. Si kastaba ha ahaatee, xakamaynta ayaa kaliya loo ogol yahay Carbide 3D CNC. Waxa ugu wanagsan, waxa ay kuu ogolanaysaa in aad samayso 2D, 2.5D iyo 3D designs, iyo waliba in aad taageerto qaababka DXF iyo STL. Dhanka kale, waa software bilaash ah, waxaana loo heli karaa macOS iyo Windows.
CAD / software design
El Naqshadaynta CAD Waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo dhowr nooc oo barnaamijyo caan ah, gaar ahaan muujinta:
Vectric ayaa abuurtay software-kan Xirfadlaha V-Carve Pro Desktop, oo leh maktabad model ah, oo awood u leh in ay ku socoto ilaa 4-axis CNC mashiinnada, oo leh taageero abuurista moodooyinka 2D, 2.5D iyo 3D adag. Software-kan waxa uu diyaar u yahay macOS iyo Windows, mana aha lacag la'aan, marka waa inaad bixisaa shatiga si aad u isticmaasho.
Software-kan kale ayaa ah tartanka tooska ah ee kii hore. Carveco Maker sidoo kale waa software ah CAD ee CNC oo u oggolaanaya naqshadeynta 2D iyo 3D. Waxaad kala dooran kartaa is-diiwaangelinta billaha ah ama sannadlaha ah, oo leh hal bil bilaash ah. Waxay taageertaa bitmap, PDF, JPEG, DWG, TIFF, qaababka DXF, waxaana si gaar ah loogu talagalay isticmaalka CNC, si ka duwan barnaamijyada kale ee CAD. Xaaladdan oo kale, diyaar u ah macOS iyo Windows.
Inkscape waa software sawir-qaadis bilaash ah. Ma aha software CAD, laakiin aad ayay caan ugu tahay bulshada CNC qaabaynta 2D. Tusaale ahaan, goynta CNC, xaradhka astaanta, iwm. Waxay taageertaa qaababka sida ODF, DXF, SK1, PDF, EPS, iyo Adobe PostScript, si loo dhoofiyo haddii aad rabto inaad isticmaasho hababka CAM. Waxa kale oo ay ogolaataa daawashada G-Code, tafatirka noodhka, iwm. Oo waxay diyaar u tahay Linux, Windows, iyo macOS.
TinkerCAD waa barnaamij kale oo qaabaynta 3D kaas oo waxaa loo isticmaali karaa online, laga bilaabo browserka webka, kaas oo si weyn u furaya fursadaha aad ka isticmaali karto meel kasta oo aad u baahan tahay. Tan iyo 2011 waxa ay heshay isticmaalayaasha, waxayna noqotay goob aad caan uga ah isticmaaleyaasha daabacadaha 3D (inkasta oo sidoo kale loo isticmaali karo CNC), iyo xitaa xarumaha waxbarashada, maadaama qalooca waxbarashadu aad uga fudud yahay Autodesk's.
Shirkadda Yurub ee Dassault Systèmes, oo ka socota shirkaddeeda SolidWorks Corp., ayaa soo saartay mid ka mid ah barnaamijyada CAD ugu fiican uguna xirfadda leh ee 2D iyo 3D qaabaynta. SolidWorks waxay noqon kartaa beddelka Autodesk AutoCAD, laakiin waa si gaar ah loogu talagalay qaabaynta hababka farsamada. Maaha bilaash, mana aha il furan, waxaana loo heli karaa Windows oo keliya, laakiin waxa ay leedahay saamiga suuqa ugu weyn, xitaa waxa ka sarreeya software Autodesk.
Ugu dambeyntii Creo waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada CAD/CAM/CAE ugu fiican naqshadeynta 3D waxaad ka heli kartaa. Waa software ay samaysay PTC oo kuu ogolaanaya inaad naqshadayso tiro badan oo alaab tayo sare leh, si degdeg ah oo shaqo yar leh. Dhammaan mahad waxa iska leh interface dareen leh oo loogu talagalay in lagu horumariyo isticmaalka iyo wax soo saarka. Waxaad samayn kartaa qaybo loogu talagalay wax-soo-saarka wax-ka-soo-saarka iyo kala-goynta, iyo sidoo kale jilitaanka, naqshadaynta wax-soo-saarka, iwm. Waxaa la bixiyaa, il xiran oo kaliya loogu talagalay Windows.
CAM Software (G-koodka CNC)
Software-caqli leh CAM, barnaamijyada ugu fiican Waxaad ka heli kartaa marxaladan mashiinka CNC waa:
Mesh CAM waa software lacag bixin ah oo ay samaysay GRZ Software. Tani waxay ku siinaysaa xal si looga gudbo 2D/3D CAD qaababka nooca DXF iyo STL ilaa G-Code (xitaa waxaad u rogi kartaa sawirka JPEG faylal 3D ah oo la mashiin karo) si uu u farsameeyo mashiinka CNC. Waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican ee bilawga ah, maadaama ay si toos ah u hagaajinayso xuduudaha iyada oo loo eegayo tayada aad dooratay, inkasta oo tani ay ka baxdo xoriyad yar. Dhanka kale, waxaad ku haysataa laba qaybood, mid lacag-bixineed caadi ah iyo PRO kale oo liisankiisu yahay laba jeer, laakiin waa ka sii dhammaystiran yahay (oo leh 15 maalmood oo tijaabo bilaash ah labadaba). Marka la eego waafaqiddeeda, waxay ka shaqayn kartaa Windows iyo macOS.
Inventor CAM sidoo kale waa software kale oo CAM caan ah oo ay abuurtay Autodesk. Tani waxay awood u leedahay in ay fududayso naqshadeynta si ay si sahlan u noqoto mid la samayn karo. Waxaad ku shaqayn kartaa nashqadaha jarista, wax lagu shiido, iyo mishiinada dhidibka 2 ilaa 5. Waxaa ku jira tiro badan oo shaqooyin ah, waana mid aad u xirfad badan oo caan ka ah qaybta warshadaha. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qaar ka mid ah hirgelinta jilitaanka, iyo saadaalinta dhibaatooyinka suurtagalka ah inta lagu jiro habaynta qaybta. Dabcan, waa loo heli karaa Windows oo waa la bixiyaa.
Siemens waxay horumarisay Solid Edge, mid kale oo ka mid ah barnaamijyada 2D iyo 3D CAD/CAM ee ugu caansan warshadaha. Waa mid aad u dabacsan, sidoo kale waa mid fudud. Waxaa loo qaabeeyey iyada oo maskaxda lagu hayo naqshadeeyayaasha qalabka elegtarooniga ah, laakiin kaliya ma abuuri karto noocyada moodooyinkaas. Sida kii hore, waxay sidoo kale leedahay awoodda jilitaanka oo samee falanqayn dhamaystiran oo ku saabsan qaybaha 3D iyo isu imaatinka. Waa la bixiyaa waxaana sidoo kale laga helaa Daaqadaha.
CamBam waa software kale oo CAM ah oo ay abuurtay HexRay Ltd., iyo aad caan u ah isticmaalayaasha mashiinada CNC. Shatiga waa la bixiyaa oo wuxuu leeyahay dhammaan hawlaha aad filayso markaad la shaqaynayso mashiinka CNC. Si ka duwan Mesh CAM, kiiskan waxaad u baahan tahay inaad ku hagaajiso xuduudaha gacanta, markaa maaha kuwa bilawga ah. Si kastaba ha ahaatee, way fududahay in la isticmaalo, iyada oo leh qalooc waxbarasho oo ka fiican kan Mesh CAM. Intaa waxaa dheer, waxaad kala soo bixi kartaa macOS iyo Windows.
Estlcam waxaa abuuray 2014 koox injineernimo Jarmal ah. Waa barnaamij fudud, oo ka qaalisan kuwa kale. Waxay kuu ogolaan doontaa inaad ka shaqeyso 2D iyo 3D, adoo soo saaraya koodhadhka lagama maarmaanka ah ee mashiinka CNC ee naqshadeynta CAD. Marka la eego qalooca waxbarasho ee ay leedahay, waxay ku fiicnaan kartaa kuwa bilowga ah iyo kuwa sameeya ee u adeegsada CNC hiwaayad ahaan. Dhibaatada ugu weyn ayaa ah in loo heli karo Windows kaliya.
Wuxuu furayaa CAM
Openbuilds CAM waa rajada weyn ee kuwa raadinaya wax ku habboon Linux, Windows, macOS iyo wixii la mid ah maadaama ay ku saleysan tahay software CAM. Waxaa dheer, waxaa ku jira diyaar u ah in la soo dejiyo oo lagu rakibo darawallada GRBL ee Linux, Windows, iyo macOS. Ma aha oo kaliya inaadan ku rakibin, laakiin sidoo kale waa bilaash. Waad ku mahadsan tahay software-kan dhammaystiran, mashiinnada CNC waxaa lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo koodhadhka G-Code si loo xakameeyo mishiinnadan. Dhanka kale, waxaa taageera bulsho weyn, waxayna bixisaa khibrad fantastik ah. Qodobka xun ayaa ah inay u baahan tahay isku xirka internetka si uu u shaqeeyo.
Inkasta oo ay sidoo kale isku xirto hawlaha CAD, waxaan ku daray qaybta CAM. Software-kan asalkiisu talyaanigu aad ayuu u dambeeyay, waa laga yaabaa aan aad u degganayn isticmaalka wax soo saarka isagoo ku jira marxaladda hore ee horumarka. Si kastaba ha ahaatee, waxa xiiso u leh awoodda ay u leedahay inay soo dejiso DXF iyo naqshadaha DWG, soo saarto G-Code, wax ka beddelka CAD, tijaabiso qalabka CNC, habaynta G-code, oo leh xisaabiyaha isku dhafan, wakhtiga, iwm. Kaliya diyaar u ah Windows
Marka lagu daro barnaamijyada CAM ee fuliya awoodaha jilitaanka ee CNC, annaguna sidoo kale Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaashid kuwan kale kuwaas oo ah simulators gaar ah:
Waa software jilid fantastik ah oo leh muuqaalo 3D cajiib ah. Barnaamijkani wuxuu ahaa mid aad loo jecel yahay ilaa 2001, maadaama uu yahay mid awood leh, wuxuu taageeraa noocyada kala duwan ee mashiinnada CNC (lathes, mishiinnada wax-shiidka, jarista ...) iyo hababka (daabacaadda 3D, goynta laser ...). Waxa kale oo ay kuu ogolaataa inaad wax ka beddesho G-Code-ka, oo kaliya ma aha in aad matasho. Dhanka shatiga, waa la bixiyaa (oo leh 30-maalmood tijaabo bilaash ah) oo diyaar u ah Windows.
Software-ka jilitaanka waa bilaash 30 maalmood, waxaana loo isticmaali karaa macOS iyo Windows labadaba. Waxay ogolaataa in la tafatiro oo la ekaysiiyo G-Code-ka naqshadaynta, si loo xaqiijiyo oo wax looga beddelo haddii loo baahdo. Software-kani wuxuu ku habboon yahay kuwa bilawga ah sababtoo ah sahlanaanta isticmaalka, iyo sidoo kale xirfadle, tan iyo markii ay ahayd loo isticmaalo shirkadaha sida Telsa, iyo sidoo kale NASA, IWM
Simulator aad u saaxiibtinimo u leh oo gebi ahaanba bilaash ah. Ku habboon sameeyayaasha iyo xiiseyaasha DIY. Waxay ku socon kartaa Windows, macOS, iyo Linux, taasoo ka dhigaysa xalka jilitaanka-madax-tooska ah. Waxay taageertaa ilaa 3 faasas oo ku jira jawiga 3D, oo leh hawlo gaar ah oo loogu talagalay shaqooyin gaar ah, xitaa PCB-yada.
NC Viewer waa jileeyaha CNC ee ku saleysan mareegaha, markaa uma baahnid inaad wax rakibto. Ma laha astaamo badan sida jilayaasha kale, laakiin way noqon kartaa ku filan si loo xaqiijiyo, oo loo sawiro G-Codes. Si ka duwan, waa in ay leedahay isku xirka internetka si uu u shaqeeyo, inkastoo ay ku samayn karto qalabyo badan iyo nidaamyada hawlgalka. Waa xor
Faa'iidada simulator-kan ayaa ah in uu la shaqayn karo tiro kasta oo faasas ah iyo dhammaan isbeddellada qalabka. Waxaa soo saartay shirkadda Talyaaniga ee Roboris, waana mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ee aad isticmaali karto. Waxay xitaa kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho module si aad u wanaajiso koodhka G adoo isticmaalaya sirdoonka macmal. Waxay leedahay shatiga lacag bixinta, waxayna diyaar u tahay Windows.
Software-ka kantaroolka bilaashka ah ee CNC iyo kuwa iska leh
Marka laga hadlayo marxaladda software-ka ee ugu dambeysa, heerka xakamaynta ee u adeegi doona CNC si uu u guto hawshiisa, barnaamijyada ugu fiican Waxay yihiin:
Xaaladdan oo kale, sida aan horay u kala soocnay CAD gaar ah ama software CAM ah iyo sidoo kale dhammaan-hal-software, farqi la mid ah ayaa lagu samayn karaa kantaroolka: G-Code-ku-gudbinta u taagan oo dhan-ku-gudbi software-ka iyo qalab-hawleed ee CNC.
Mach 3 iyo Mach 4 waa laba kontorool oo caan ah oo loogu talagalay Windows (oo leh shatiga lacag bixinta, oo leh daabacaad hiwaayad jaban ah iyo mid qaali ah oo isticmaalka warshadaha ah). Waxay u oggolaanayaan inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa mashiinka CNC iyada oo loo marayo is-dhexgalka garaafyada. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho add-on loo yaqaan LazyCAM si aad ugu beddesho DXF, BMP, JPG iyo HPGL una beddelo G-Code. Waxaa lagu xidhi karaa mashiinka iyada oo loo marayo deked isbar-bar socda, Ethernet, iyo sidoo kale USB, laakiin maaha wakhtiga dhabta ah.
LinuxCNC waa software kontorool oo lagu sameeyay shatiga bilaashka ah oo furan ee madal Linux.. Gebi ahaanba waa bilaash waxayna kuu ogolaanaysaa inaad isku mar maamusho ilaa 9 faasas, oo la jaanqaadi kara USB, inkasta oo ay xoogaa gaabis tahay, sidoo kalena la jaanqaadi karta Ethernet iyo dekedo isbarbar socda. Shuruudaha darawalkaani waa hooseeyaan, xitaa waxaad ku isticmaali kartaa Raspberry Pi 4 iyo wixii ka sareeya. Dhanka kale, waxay leedahay is-dhexgal garaafeed dareen leh waxayna leedahay tiro badan oo hawlo ah oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa. Waa la habayn karaa, waxayna leedahay bulsho badan oo khadka ah.
TurboCNC waa software ay soo saartay Dak Engineering. Aad bay u fiican tahay oo kiiskan waa ee nidaamyada hawlgalka MS-DOS. Waxay leedahay bulsho adeegsade firfircoon, waxayna isku mar maamuli kartaa ilaa 8 faas. Waxay leedahay tifaftiraha kood-ku-dhisan, waxayna leedahay astaamo wanaagsan.
HeeksCNC waa bilaash, software il furan, oo si gaar ah loogu talagalay nidaamyada Unix-ka, sida macOS iyo Linux, in kasta oo ay sidoo kale la jaan qaadayaan Windows. Waxa kale oo ay u baahan tahay in lagu rakibo baakado dheeraad ah sida HeeksCAD, OpenCASCDE ama OCE (OpenCASCDE Community Edition), iyo wxWidgets. Software-kani aad buu u dhammaystiran yahay, oo ay ku jiraan hawlaha CAD, CAM iyo xakamaynta.
SOO DIRAYAASHA G-code ee madax-banaan
Soo-diraha G- Koodhka Caalamiga ah (UGS)
Soo diraha Universal Gcode (UGS) waa barnaamij kale oo caan ah oo bilaash ah oo furan software CNC ah. Waxay noqotay mid aad loo jecel yahay sababtoo ah tirada badan ee hawlaheeda iyo sahlanaanta isticmaalka. Waa mid aad u saaxiibtinimo, sidaas darteed waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan bilowgayaasha. Waxay ogolaataa in lagu dhaqmo G-Code oo ay si gooni ah u maamusho faashashka, sida Z oo keliya, iyada oo aan la xakameynin XY. Waxay ku jirtaa JAR (Java) oo la fulin karo, si ay ugu shaqeyso Linux, MacOS, Windows, iyo xitaa SBC-ga sida Raspberry Pi.
Xakamaynta Dhismaha Furan
Horumariyaha la midka ah ee OpenBuilds CNC ayaa sidoo kale sameeyay software-ka kantaroolka saaxiibtinimada leh ee DIY. Waxaa sameeyay Peter Van Der Walt, aasaasaha LaserWeb. Waxay kuu ogolaan doontaa inaad haysato qalabka codsigan iyo la shaqeeya Linux, macOS, iyo Windows. Waxay xakameyn kartaa router CNC iyo mashiinnada CNC, oo la shaqeynaya laser, balaasmaha, aaladaha jet-biyoodka, iwm. Waa inaad sidoo kale ogaataa inay tahay il furan, bilaash ah, oo leh GUI dareen leh.
GRBL Candle waa software bilaash ah oo loogu talagalay xakamaynta CNC ee router-yada ku saleysan looxyada GRBL. Waa mid aad u fudud, waxayna bixisaa khibrad wanaagsan. Wax ku ool u ah kuwa sameeya iyo mashaariicda DIY sababtoo ah helitaankooda iyo fududaantooda, taasoo ka dhigaysa mid ku haboon xitaa kuwa bilowga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale leedahay xuduudo horumarsan oo aad hagaajin karto haddii aad rabto. Waxay la jaan qaadaysaa Windows iyo Linux, waxayna ku tiirsan tahay maktabadda Qt ee daawadayaasha. Nasiib darro, ma taageerto wareegga dhidibka iyo magdhowga.
PlanetCNC waa software kale oo weyn oo CNC router ah. iyo in aad u baahan doonto in aad haysato darawal sita shati sax ah. Software-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ka qabato G-Code, oo aad ogolaato koontarool habboon. Waxay leedahay dabacsanaan fantastik ah, oo ku habboon Gerber, DXF, NC, iyo qaababka PLT/HPGL. Waxay ku qulquli kartaa USB waxayna la jaan qaadi kartaa Windows, macOS, Linux, iyo sidoo kale Raspberri Pi.
UCCNC waa daawade 3D waqtiga dhabta ah iyo kontaroole aad u awood badan kaas oo taageera kontaroolayaasha dhaqdhaqaaqa sida UC400ETH, UC300ETH, UC300, UC100 iyo AXBB-E. Waxay si fiican ugu shaqeysaa mashiinno leh ilaa 6 faas, aad bayna u fiicantahay waxayna kuu ogolaaneysaa inaad hagaajiso cabirro badan. Waxay la jaan qaadayaan faylasha DXF, waa la bixiyaa, waxayna la jaan qaadayaan Windows.
ChiliPeppr waa software kantaroolka CNC browser web ku salaysan, si aad ula shaqayn karto G-Code ka nidaamyada kala duwan. Barnaamijkan wuxuu la jaan qaadayaa TinyG, Lua iyo GRBL, way fududahay oo kaliya waxaad u baahan tahay inaad rakibto darawalka mashiinka CNC ee ku xiran. Waa bilaash, oo il furan.
mashruuc kale oo ka mid ah il furan oo xor ah. Fur CNCPilto Waa qalab kontorool oo leh suurtogalnimada in lagula shaqeeyo mashiinka noocan ah ee hawlo badan, oo ay ku jiraan PCB-yada qaybta elektiroonigga ah. Uma baahna wax kale si ay u shaqeyso, waa sahlan tahay, waxay taageertaa GRBL firmware, isku xirka TCP, waxayna ku haboon tahay Windows.
GRBL waa firmware-ka il furan oo lagu xakameeyo taarikada Arduino UNO (ATmega328P). Firmware-kani wuxuu ogolaanayaa isku xirka USB umana baahna deked barbar socota sida kuwa kale, waana sababta ay faa'iido weyn u leedahay. Waa lacag la'aan waxaana markii hore loo sameeyay warshadaynta CNC, in kasta oo hadda loo isticmaali karo mashiinno kale. Xaddidaadda hadda jirta waa in la xakameeyo ilaa 3 faas oo aan ka badnayn. Waxay caan ku tahay kuwa sameeya waxayna u shaqayn kartaa mashiinnada Carbide 3D, BobsCNC, OpenBuilds, Fikradaha Spark, iwm.
Marlin waa il furan oo CNC firmware ah. Waxay si ku filan u xakameyn karaan mashiinka CNC (MPCnC-Mx) waxaana lagu soo ururin karaa iyadoo la isticmaalayo Android IDE. Astaamaha waxaa ka mid ah, waxay u taagan tahay inay taageerto Arduino Mega 2560 + Ramps v1.4 iyo Teensy, waxay u ogolaataa labanlaab xakamaynta X iyo Y faashashka matoorada, labalaab xaddidan ee XY, ilaa 32 microsteps, iyo sidoo kale waxay ogolaataa xakamaynta tillaabooyinka per kacaanka dunta dunta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » CNC » Prototyping iyo naqshadeynta CNC
OpenBOT: waxa ay tahay iyo beddelka